Sidee looga joojiyaa tuugada inay xadaan waxyaabahaaga
Khamiis, Juun 8, 2010 Jimco, Juun 15, 2018 Douglas Karr
Horaantii todobaadkan, qaarkiin waxaad ogaateen inaan raacay blogger wax ka xadaya Martech Zone. Waqtiyada qaarkood, tani waxay dhacdaa marka qof uu ku farxo oo uu go'aansado in ay ixtiraamayaan aniga oo kordhinaya dhagaystayaasha. Maaha kiiska. Kaftankaani xitaa wuxuu ku daabacay boostada bogga sadexaad ee magaca asaga qoraaga ah. Lama aqbali karo.
Ninkani wuxuu soo dhigay qoraalkii la xaday bartiisa blogger-ka. Taasi caqli ma ahayn, maxaa yeelay Blogger wuxuu u hoggaansamayaa Sharciga Xuquuqda Daabacaadda ee Digital Millenium (DMCA). Waxaan buuxiyey foomka Blogger oo waxaan helay ogeysiis maanta inay ka saareen waxyaabaha la xaday.
Aad ayaan ugu faraxsanahay taageerada Blogger ee tan!
Sida Loo Diyaariyo In La Xado Mawduucaaga
Waxaa muhiim ah in la ogaado inaan si ula kac ah uga tagayo raad raaca rootiga qoraaladayda. Marar dhif ah ayay tuugadani dib u qoraan ama nuqulaan nuxurka oo ay ku dhejiyaan. Taabadalkeed, waxay qoraan algorithms waxayna qabsadaan quudintaada RSS waxayna si fudud ugu riixdaa boggooda. Inta badan tani waxay dhacdaa, baloog-waraha ma ka warqabo. Aniga. Mid ka mid ah sababaha aan u horumariyo Plugin PostPost waxay ahayd si aan wax uga beddeli karo uguna dari karo waxyaabaha ku jira cagtayda. Qoraal kasta oo ku jira quudintayda 'RSS' wuxuu leeyahay nooc xiriir ah oo dib ugu noqda boggeyga.
Marka xigta, waan dhigay Warqadaha Google iyada oo leh xayndaabkeyga sida ereyga raadinta (iyo sidoo kale qaar kale oo aanan kaaga sheegi karin). Hadda - mar kasta oo qof ku xirmo balooggeyga, waxaan helaa digniin emayl ah oo leh qayb ka mid ah boostada. Waa isla markiiba la aqoonsan karo markaan akhriyo waxyaabaha ku jira jirka digniinta.
Dagaal u kac
Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah waxyaabaha ugu qarsoon ee aan sameeyo ay tahay inaan isla markiiba sawirro ka iibsado iStockPhoto dhammaan qoraaladayda usbuuca soo socda ama wixii la mid ah. Maaddaama aan bixiyo lacagta sawirrada, waa sharci aniga in aan isticmaalo laakiin cid kale ma jirto. Haddii aad doqon tahay inaad wax xaddo waxyaabaha ku jira, waxaad u badan tahay inaad daabacayso sawirradan la iibsaday sidoo kale. Hadda waxaan heystaa shirkad weyn oo cadaab ku ah la dagaallanka xatooyada xuquuqda lahaanshaha dhinacayga. Isla marka aan arko qoraalada la daabacay, waxaan la xiriiraa taageerada illaa iStockPhoto oo ka warbixi mid kasta oo ka mid ah qoraalada, sawirada, halka ay ka yimaadeen iyo in la xaday.
Markaan runta ka hadlo, ma hubo in iStockPhoto ay daba gashay mid ka mid ah kiisaska… dhammaantood waxay hoos u dhigeen qoraalladii markaan helay oo aan u sheegay. Weli wax yar oo dambi ah ayaan ku helayaa aniga aniga in kastoo. Ma doonayo inaan dhinac khaldan uga jiro dacwadda xuquuqda daabacaadda oo ay la socoto iStockPhoto. Waxay heystaan ​​jeebado qoto dheer iyo qareenno badan.
Kama aammusni. Waxaan sameeyaa a Whois.net raadinta si loo aqoonsado shirkadda martigelinta iyo qofka leh bogga. Waxaan isku dayi doonaa inaan si toos ah ula xiriiro qofka marka hore. Kadib emayllada waxay u baxayaan shirkadda martigelinta, tweets ayaa sii xanaaqaya, iyo farriimaha Facebook Wall ayaa la soo dhejiyaa. Ma joojin doono ilaa aan ka bilaabo jawaabaha.
Sidii aan horay u sheegay, waligay ma ahayn inaan ka gudbo qodobkaan. Had iyo jeer fursad ayaa jirta in qof uu xado waxyaabaha aan ka kooban yahay oo uu noqdo meel ka baxsan xeebta, qarsoon, oo aan macquul ahayn in la ceyrsado. Waxaan ku dadaali doonaa inaan ku soo wargaliyo aaladaha raadinta xilligaas, laakiin MA U oggolaan doono inay ka baxsadaan. Waa inaadan sidoo kale ahayn!
Jul 9, 2010 markay ahayd 8:12 AM
Tani waa boosteejo weyn!
Laakiin waxaan isweydiinayay inaad talo iga siin kartid xaalad khiyaano leh laakiin la mid ah.
Aynu nidhaahno dadku waxay ku dhajinayaan sawirradaada iyo shaashadaha sawirradaada sabuurad sawir qarsoodi ah (akhri: 4chan.org), taas oo caan ku ah in aan waxba laga fiirsan. Sideen ugu dhaqaaqaa si aan alaabadaas meesha uga saaro hadaanan xitaa garanayn cida dhajiska soo dhigaysa?
Jul 9, 2010 markay ahayd 9:20 AM
Waxaad sameyn kartaa dhowr waxyaalood:
1) Calaamadee sawiradaada. Ku qor qoraal iyaga ku qoran oo sheegaya shirkaddaada ama magaca websaydhka. U fiirso boggaga sida iStockphoto waadna arki doontaa tan.
2) Way cadahay sharciga 4chan in xadgudubyada si adag loola dhaqmi doono. Waxaan kala xiriiri lahaa iyaga bogga loo maro http://www.4chan.org/contact - haddii aysan ka jawaabin, ugu dir farriimo Twitterka ama meel kasta oo aad kari karto.
3) Dadaalkii ugu dambeeyay ee godka: Waad dacweyn kartaa iyaga. Gaar ahaan haddii boggu uusan shisheeye ahayn oo milkiilayaashiisa la yaqaan, ka daba iyaga.
Jul 9, 2010 markay ahayd 9:29 AM
Tani dhab ahaan waxay ku dhici doontaa qaybta "Ka taxaddar Doug".